Qasabadaha Tilmaamaha-Jikada Qasabadaha, Kaydiyaha dheriga, Musqusha Qolka Musqusha | WOWOW
Qasabadaha jikada, Dheriga buuxi, Qasabada Musqusha | WOWOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada(Bogga 27)
Sida loo xusho tubada adag ee naxaasta ah
2020 / 07 / 13 6071
Fiiri dusha sare. Tuubbooyinka buluug oo tayo sare leh waxay leeyihiin shaqo sare oo dusha sare ah, oo badanaa la nadiifiyo oo la doorto, sidaa darteed dusha sare waxay u egtahay mid dhalaalaysa oo dhalaalaysa. Markaad iibsanayso, y ...
Sida loo xusho tubada biyaha kulul iyo qabow
2020 / 07 / 13 5696
I. Astaamaha agabyada kala duwan ee tubooyinka biyaha kulul iyo qabow Qubooyinka Bulxaariga ah ee laga sameeyay naxaasta saafiga ah waa kuwo qaali ah oo la dammaanad qaaday. Markaad iibsanayso, si taxaddar leh u hubi naxaasta si ...
Sida loo xusho tubooyinka birta ka samaysan
2020 / 07 / 12 6025
Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin inay taxadaraan gaar ahaan markay wax iibsanayaan. Iibsashada alaabada tubada tayada leh waxay diiradda saareysaa yareynta roobka biraha culus, gaar ahaan walxaha sunta rasaasta leh. Marka, vario ...
Sida loo xalliyo tubbadda daadashada
2020 / 07 / 12 5868
Aynu damino waalka biyaha ka dibna daaran qasabadda. Eeg dhismaha marka hore, waxaa jira astaan ​​buluug ah oo hoosta ku taal. Dufanka ka duub oo marka hore u soo deg, ka dib marka loo eego t ...
Sida loo doorto tubbada aaminka ah
2020 / 07 / 12 4827
1. Qalabka tubada biyaha ka samaysan ee bulukeetiga birta ku shaqeeya aan lahayn birta bilaa macdanta leh, aashitada u adkaysta, alkali u adkaysan waydo, hawo-la’aanta, ha sii dayn walxaha waxyeelada leh, hana wasakheynin biyaha tuubada s ...
Sida loo nadiifiyo tubbada musqusha
2020 / 07 / 12 6803
Markaad gashato tuubada, muddo kadib, waxaad arki doontaa in wasakhda biyuhu ay si fudud uga muuqan karaan dusha biyaha. Markay biyuhu qalalaan, waxay sameeyaan dhibco aad u daran oo aan muuqan. Hadaadan tabin & # ...
Sida loo doorto tubbada sida waafaqsan musqusha
2020 / 07 / 12 4728
Dusha biyaha buluuga ah ee caadiga ahi waa bir-silsilad, chrome steel, lacquered, iyo seedka. Waxaa ka mid ah, birta-christ-steel steel waa midka ugu badan. Tubooyinka midabada leh ayaa sidoo kale dadku jecel yihiin. Kornaylka ...
Sida loo rakibo tubbada darbiga-darbiga jikada dhexdeeda
2020 / 07 / 12 4044
Marka hore, tillaabooyinka rakibidda Kahor rakibaadda, dami bixinta biyaha si aad uga saarto wax kasta oo nijaasta ah, wasaqda, ama wasakhda kale ee ku jiri kara tuubooyinka, ka dibna dami biyaha. Kani waa mid ...
Sida loo xaliyo gabowga tuubbada biyaha
2020 / 07 / 11 3861
Dhibaatooyinka caamka ah iyo hababka dayactirka 1. Qasabad qasab ah ama mugga biyaha oo yaraada, goobooyin ma leh. Sababta suurtagalka ah: Miiraha xumbada ayaa ku wasakh ah boodh ama qashin. Xalka: Ka saarista ...
Sida loo doorto tubbada biyaha
2020 / 07 / 11 4989
Markaad iibsaneysid tubbada biyaha, waa inaad tixgelisaa tayada marka hore ka dibna qaabka. Waxaa jira qaabab fara badan oo bulukeeti ah, kuwaas oo noqon kara tayo marka hore iyo qaabka labaad. Xakameynta tuubada tubada waxay leedahay dambi ...
Sida loo doorto tubbada waarta ee gurigaaga
2020 / 07 / 11 4421
Markii la horumariyo waqtiga iyo horumarka sayniska, waxaa ina soo food saartay waxyaabo badan oo cusub, laakiin markii heerka nololeedkeennu uu hagaago, waxaan u baahan nahay inaan horumarinno qaar ka mid ah baahiyaha nolosha, sida ...
Sida loo doorto tubbada qubayska
2020 / 07 / 11 5062
I. Qaabdhismeedka ayaa loo qaybiyaa: 1. Nooca kalida ah. Moodelkan yutiilitiga wuxuu leeyahay faa'iidooyinka beddelka rogrogmi kara, nolosha adeegga oo dheer iyo hagaajinta heerkulka dhaqsaha iyo habboon ee habboon. 2.…